HH, Milupi, Maureen land in Kabwe ahead of Saturday rally – Zambian Watchdog
HH, Milupi, Maureen land in Kabwe ahead of Saturday rally
5 December 2014 20:16
Hichilema greets the crowd
Thousands of people welcomed UPND leader Hakainde Hichilema when his chopper landed at Kabwe’s Comet grounds as evening business came to standstill in the central business district as his motorcade drove through. Mr. Hichilema who is accompanied by former first lady Maureen Mwanawasa and Alliance forADD president Charles Milupi will address a rally at the historic Makululu grounds tomorrow.
And efforts by PF thugs who were planted to disrupt the jubiliant people failed, while a pocket of them were seen waving Chitenge materials bearing late president Sata’s portrait, people joined the UPND youths in chanting slogans as ‘let’s go HH, let’s go’.
And UPND central province youth leader Milner Mwanakampwe has condemned the PF’s attempt to disrupt the peaceful motorcade. Mwanakampwe said his youths shall always restrain and deliver message to the voters but if pushed too far by PF, will not hesitate to hit back hard.
Western province seccessionist leader captured
GBM says won’t attend Edgar Lungu rally in Kitwe